Vaovao - Avereno jerena ny sarin'ny fiara mahazatra (fiara mahazatra) modely fankasitrahana ny fiara
Diecast kamiao sy traktera miaraka amin'ny maodelin'ny tranofiara
Fiara modely plastika
Fiara modely resin
Avereno jerena ny sarin'ny fiara mahazatra (fiara mahazatra) modely fankasitrahana ny fiara
Ny fiara taloha, fantatra koa amin'ny anarana hoe fiara mahazatra, amin'ny ankapobeny dia miresaka momba ny Ady Lehibe Faharoa na fiara taloha. Ny fiara taloha dia vokatry ny nostalgia. Fiara izay efa fanaon'ny olona taloha izy io ary mbola afaka miasa ankehitriny. Ny anarana anglisy dia fiara antitra. Ny tambajotra modely 0312 dia misy lahatsoratra maro momba ny sarin'ny fiara taloha. Na izany aza, noho ny tsy fisian'ny teny mifandraika rehefa navoaka izy ireo, dia tsy azo aseho tsirairay izy ireo amin'izao fotoana izao. Halaminay haingana araka izay tratra izy ireo.
Nanangana coup modely Ford ny Sunstar
Ny foto-kevitry ny fiara kilasika dia nanomboka tamin'ny 1973 ary nipoitra tao amin'ny magazay anglisy malaza sy fiara mahazatra. Na dia tokony ho "fiara taloha efa mahazatra" aza ny fandikana ara-bakiteny azy, noho ny lokony antropomorphic mahery, ny teny hoe "fiara klasika" dia nahazo ny fankatoavan'ireo mpankafy fiara mahazatra ary niely haingana, lasa lohatenin'ny fiara taloha ho an'ny mpitia erak'izao tontolo izao .
Na izany aza, mandraka ankehitriny, mbola tsy misy famaritana mahazatra momba ny fiara mahazatra, ary mbola mifamaly ihany ny mpahay tantara sy ny mpankafy fiara mahazatra. Ny klioban'ny fiara amerikana mahazatra dia mitanisa ny marika na maodely tiany (toy ny: famokarana 1925-1948) ho klasika feno, izay faritana ho "fiara miavaka, misy famolavolana tena tsara, fenitra sy famokarana avo lenta". Aleony ny marika amerikana, fa ny vokatra eropeana dia manenina noho ny tsy fahitana azy.
Sun star dia mandefa ny maodelin'i Ford balsam Tudor
Tsy ny fiara taloha rehetra no mendrika ho fiara mahazatra. Ilaina ny fikojakojana tsara. Eny an-tsena, tsy dia misy fiara miaraka amina endrika mahazatra. Tahaka ny ankamaroan'ny fiara dia fiara-pianakaviana varavarana efatra lafo vidy, dia fitaovana fitaterana fotsiny izany.
Fanasokajiana fenitra ny fiara mahazatra
Klioban'ny fiara taloha any Amerika
Antiquises: fiara rehetra talohan'ny 1930
Famokarana: ny fiara rehetra alohan'ny 1930
Klasika: fiara tsara dia tsara 1930-1948
Prestige: fiara tsara kalitao 1946-1972.
Famokarana voafetra: fiara "zanabola manokana" novokarina betsaka taorian'ny Ady lehibe II
Klioban'ny fiara taloha anglisy
Amin'ny ankapobeny, ny fizarana misimisy kokoa dia izao manaraka izao:
Talohan'ny 1918, ny fiara rehetra dia nantsoina niaraka tamin'ny antitra, izay nozaraina ho Edward VII sy veteran;
Ny fiara nanomboka tamin'ny 1918 ka hatramin'ny 1931 no marika malaza voalohany;
Nanomboka tamin'ny 1932 ka hatramin'ny 1945, marika malaza ny fiara;
Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia nohajaina ho kilasika maoderina ireo fiara solontena.
Klioba sasany any Sina
Fiara taloha: talohan'ny 1925;
Fiara kilasika: 1926-1941;
Classics ady taorian'ny ady: taorian'ny 1945.
Ny fizarana an'i Etazonia amin'ny ankapobeny dia raisina ho fenitra manerantany. Satria i Etazonia no fanjakana fiara lehibe indrindra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara mahazatra (ny tsena lehibe amin'ny fiara raitra any Eropa taloha sy aorian'ny ady dia Etazonia), ary aorian'ny ady, ny amerikana miaraka amin'ny fananana ara-bola sy ara-bola matanjaka. ny loharano dia saika namono ireo fiara kilasika lafo vidy tany Eropa.
Adiresy: Room 201, No.5 Weige Road, Shipai Town, Dongguan City, Provinsi Guangdong